यसरी छनोट भयो आईजीपी, को हुन् सर्वेन्द्र ? - inaruwaonline.com
यसरी छनोट भयो आईजीपी, को हुन् सर्वेन्द्र ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २८, २०७४ समय: ८:५४:४३
काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार साझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा खनालद्वयलाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिराज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
२०४९ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेन्द्र खनाल २०५९ मा सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरेका थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीको लडाकुसँग लड्न सशस्त्र गठन गरिएको थियो। उनी सशस्त्र प्रवेश गरेपछि त्रिपुरा गण हुँदै तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बढी बसे। सशस्त्रको एआईजी बढुवामा एक्लै बढुवा हुन सफल भएका शैलेन्द्र सशस्त्रभित्र कमान्ड गर्नसक्ने अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन्। लामो समय सचिवालयमा बिताएका शैलेन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको नीति–नियमसँगै ऐन निर्माणमा समेत उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए। मध्यक्षेत्र पथलैयामा बस्दा शैलेन्द्रले आर्थिक अनुशासनलाई पारदर्शी बनाएका थिए।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।